Sikirie brightening face mask( 30ml x5pcs)
Size : ( 30ml x5pcs
Facial mask ကောင်းကောင်းလေးမှကြိုက်တက်တဲ့သူတွေ အတွက်၊ အနာအဆာကင်းပြီး နုပျိုတောက်ပချင်သူတွေ အတွက် sikirie ရဲ့ Intensive Face Mask လေးတွေ
အရေးအကြောင်းများကို ပြုပြင်ပေးပြီး အသားအရည်ကို စိုပြေဖြူဖွေးစေကာ နုပျိုးချောမောလှ စေသော sikirie brightening face mask လေးပါနော်
Unique natural essence skincare brand
Sikirie is an unique natural essence skincare brand, established in Sydney, Australia. With the brand ethos of ‘Natural skin by smart care’, Sikirie is committed to provide products with 100% naturally derived and preservative free ingredients to women all around the world.
Being rich in nature resources
Being rich in nature resources, it is no surprise this continent is home to some of Mother Nature’s best skin-loving ingredients. With years of nature observation, research and exploration, combining with local’s organic skin care philosophy, Sikirie has developedarange of soothing, authentic and exceptional products that focusing on different skin types and conditions.
Sikirie Hydrating Jelly Mask
အေးမြတဲ့ ခံစားချက်ကိုပေးစွမ်းပြီး Jelly လိုမျိုး အထိအတွေ့ကိုရရှိစေကာ ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီး တစ်ခါသုံးအထုတ်ပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Sikirie Jelly Mask ဟာ မျက်နှာအတွက် အစိုဓာတ်ကိုဖြည့်ပေးပြီး တင်းတိတ်အမဲစက်တွေကိုသက်သာစေပါတယ်။
Sikirie Intensive Soothing Toner 120 ml
Australia ကထုတ်တဲ့ အနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ရေဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးတဲ့ Sikirie Intensive Soothing Toner လေးပါ
Sikirie Makeup Remover
သဘာဝပန်း၊ အပင် အရွက်တွေရဲ့ အနှစ်သာရတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် အနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ စေးကပ်တာမျိုးလည်းမရှိဘဲ မိတ်ကပ်တွေကိုလည်း ၉၉ % လုံးဝသန့်စင်ပေးတယ်။sensitive skin အပါအဝင် all skin type လည်းသုံးလို့ရတဲ့ sikirie make up remover လေးပါ။
Sikirie3in 1 Micro Essence 50 ml
Australia ထုတ် Toner , Essence, နို့ရည် (3) မျိုးပေါင်းထားတဲ့ Sikirie3in 1 Micro Essence လေး ပါ
Sikirie Hydrating face mask( 30ml x5pcs)